नेपाल आज | बाहिर नायिका, भित्र यौन धन्दा
समाचार मनोरञ्जन कला साहित्य
बाहिर नायिका, भित्र यौन धन्दा
सोमबार, ११ चैत २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
अहिले बलिउड, हलिउड, कलिउड जताततै चलचित्रका नायक नायिकाहरुका रसरंगका घटना बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अझ चर्चित नायिकाहरुका यौन काण्ड नै सार्वजनिक हुँदा त्यसले बेग्लै सनसनी मच्चाउने गरेको छ ।
उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समाजमा उनीहरुको जीवन भद्रगोल बनेको छ । आज हामी हलिउड र कलिउडको नभइ बलिउडमा मच्चिएका केही चर्चित नायिकाहरुका सनसनीपूर्ण यौन काण्डबारे जानकारी दिंदैछौं ।
सेक्स र्याकेट धन्दामा ‘सावधान इन्डिया’ शो कि नायिका समेत पक्राउ परेकी थिइन् । यी नायिकाले ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्म चार्ज गर्ने गरेको थाहा हुन आएको छ ।
चेन्नईको होटलबाट सुकन्या पक्राउ
तमिल, तेलुगु र मलयालम फिल्मकी नायिका तथा व्यावसायिक भरतनाट्यम डान्सर सुकन्या भारतको चेन्नई स्थित एक होटलबाट देह व्यापारको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन। गिरफ्तार पछि उनले पैसाको लागि देह व्यापार गरेको खुलेको थियो।
श्वेता बसु प्रसाद सेक्स र्याकेटमा फसिन
सन् २०१४ मा हैदराबादको एक सेक्स स्क्यानडलमा श्वेता बासुको नाम आएको थियो। दुई महिनासम्म रेस्क्यू होममा बिताएपछि उनी घर फर्केकी थिइन। पछि हैदराबाद सेशन कोर्टले उनलाई सफाई पनि दियो। तर सेक्स र्याकेटमा नाम आएपछि उनको कुनै फिल्म रिलिज हुन सकेन ।
देह व्यापारमा ऐश अन्सारी
‘चलते चलते’ र ‘ओम शान्ति ओम’ जस्ता ठुला फिल्ममा काम गरिसकेकी दक्षिण भारतीय नायिका ऐश अंसारीलाई सन् २०१३ नोभेम्बर ५ मा रंगे हात देह व्यापार गर्दै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो। उनी संग होटलबाट अन्य तीन महिलाई पनि पक्राउ परेका थिए ।
वनेश्वरी पनि देह व्यापारमा
कयौं तमिल फिल्म र धारावाहिकमा काम गरेर राम्रै कमाई गर्दा पनि भुवनेश्वरी देहव्यापार गर्दै गर्दा सन् २००९ मा चेन्नइमा दुई अन्य केटीहरु सहित पक्राउ परिन। उनीमाथि आफ्नै अपार्टमेन्टबाट सेक्स र्याकेट चलाएको आरोप लागेको थियो। छिमेकीले गडबडीको शंका भनि प्रहरीलाई सूचना दिएपछि उनी पक्राउ परेकी थिइन।
हाई–प्रोफाइल सेक्स र्याकटमा श्रावणी
तेलेगु धारावाहिक ‘हिमाबिन्दु’ र ‘लाया’ मा काम गरि सकेकी नायिका श्रावणी एक हाई प्रोफाइल सेक्स र्याकेटको केशमा पक्राउ परिन । उनी ३ अक्टोबर, २०१३ मा रंगे हात पक्राउ परेकी थिइन। उनको साथमा जयराल स्टील नामक कम्पनीका मालिक संजनकुमार गोयनका पनि पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले ती दुइको साथबाट २ लाख रुपैयाँ बरामद समेत गरेको थियो।
किन्नरा सेक्स ब्रोकर
दक्षिण भारतीय नायिका किन्नरा सेक्स ब्रोकरको भुमिकाको लागि आरोपित थिइन। एक न्युज च्यानलको स्टिंग अपरेसनको क्रममा यो खुलासा गरिएको थियो। उनले निर्देशक तथा निर्मातालाई लोभ देखाएर पनि कयौं फिल्म हत्याएको बताइने गर्छ।
साउथकी नायिका सायरा बानू रंगेहात पक्राउ
हैदराबादमा सन् २०१० अगस्ट २३ मा एक सेक्स र्याकेटको भन्डाफोर भएको थियो। सो काण्डमा कयौं नायिका रंगे हात पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका ९ जना मध्ये २ जना फिल्मका नायिका थिए। जसमा एक थिइन नायिका सायरा बानू।
ज्योति पनि देहव्यापारमा
दक्षिण भारतीय नायिका सायरा बानू जुन सेक्स र्याकेटमा समातिएकी थिइन, सोही घटनामा ज्योति पनि पक्राउ परेकी थिइन।
तिन दिनदेखि अमिताभ अस्पताल भर्ना ! के भयो ?
लागूऔषध तस्कर र प्रहरीबीच गोली हानाहान !
आज शुक्रवार : माता लक्ष्मीलाई खुसि पार्नका लागि यस्ता काम गर्नुहोस !
यी हुन् विज्ञानले नै प्रमाणित गरेको विश्वको सर्वाधिक सुन्दर महिला ! (फोटोफिचर)
१३ वर्षीया आफ्नै छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्ने बाबु पक्राउ